डा. पाण्डेलाई ‘हेल्थ रिसर्च लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको सातौँ समिट सम्पन्न - Health Today Nepal
डा. पाण्डेलाई ‘हेल्थ रिसर्च लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको सातौँ समिट सम्पन्न
July 3rd, 2021 समाचार0comments
काठमाडौँ, १९ असार : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको सातौँ समिट शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । समिटको समापनको अवसरमा सरुवारोग विज्ञ डा. बासुदेव पाण्डे ‘हेल्थ रिसर्च लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड २०२०’बाट सम्मानित भएका छन् । कार्यक्रममा डा. पाण्डेलाई हेल्थ रिसर्च लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड २०२० बाट सम्मान गरिएको हो । डा. पाण्डेले कोरोना संक्रमणको बेला गत बर्ष इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखाको निर्देशक भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
डा. पाण्डेले सरुवा रोगहरुका बिषयमा देश र विदेशमा गरि करिव १ सय भन्दा बढी अनुसन्धान प्रकाशित गरेका छन् । यस्तै, उदयनारायण यादवलाई ‘हेल्थ रिसर्च अवार्ड २०२०’बाट सम्मानित गरिएको छ । उनले धेरै अनुसन्धान नेपालीहरुको स्वास्थ्यका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन् ।
यस्तै मृगेन्द्र सम्झना मेडिकल ट्रष्ट योङ्ग हेल्थ रिसर्चर अवार्ड (मेडिकल डाक्टर क्याटोगोरी) तर्फको अवार्ड डा विपिन अधिकारीले पाएका छन् । मृगेन्द्र सम्झना मेडिकल ट्रष्ट योङ्ग हेल्थ रिसर्चर अवार्डबाट डा विष्णु प्रसाद मरासिनीले पाएका छन् ।
‘बेस्ट पेपर अवार्ड पोस्टर’तर्फ दिक्षा न्यौपानेले पाएकी छिन्। दिक्षाले कर्णाली प्रदेशमा कोभिड केशहरुमा देखिएको लक्षण र त्यसले फैलाएको संक्रमणबारे पेपर प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बेस्ट पेपर ओरल प्रिजेन्टेशन अवार्ड डा. निशान्त कटुवालले पाएका छन् । कटुवालले कर्णाली प्रदेशमा गरिएको कोभिड परीक्षणको आणविक विधिको तालिममा गरिएको अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी बेस्ट डिपार्टमेन्ट अवार्ड २०२० परिषदको अनुसन्धान विभागले पाएको छ । दुर्गादेवी ज्ञवाली जेएनएचआरसी बेस्ट पेपर अवार्ड २०२० ‘इन्टेक एसेस्मेन्ट एण्ड डायग्नोस्टिक एक्युरेसी डिफिसिट हाइपरएक्टीभिटी डीस डायग्नोस्टिक स्केल बीइङ्ग डेभलप चिल्ड्रेन इन नेपाल’ भन्ने शीर्षकले पाएको छ। एनएचआरसी वेष्ट पेपर अवार्ड नर्मदा देवकोटाले पाएकी छन् ।
यस्तै यसबर्षको वेष्ट इम्प्लोई अवार्ड परिषदका सुरक्षागार्ड महेश्वर चौधरीले पाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, परिषदका अध्यक्ष प्राडा गेहनाथ बराल र सदस्यसचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त रुपमा उक्त अवार्ड प्रदान गरेका थिए ।
Previous article भारतमा उत्पादित कोभ्याक्सिनको प्रभावकारिता ७७‍.८० प्रतिशत
Next article करेन्ट लागेर तीन जनाको मृत्यु